Wararka - Qufulka albaabka ciyaarta oo dhan waa kan.Waxay soo baxday in albaabka ugu yar uu noqon karo mid aad u qurux badan!
Qufulka albaabka ciyaarta oo dhan waa kan.Waxay soo baxday in albaabka ugu yar uu noqon karo mid aad u qurux badan!
Albaabada aan la arki karin guud ahaan waa nashqado isku dhafan oo gidaarka ah.Albaabka iyo gidaarka waxaa inta badan loogu talagalay inay yeeshaan midab asal ah, kaas oo lagu dhejin karo meelo kala duwan oo shaqeynaya sida qolalka hurdada, qolalka waxbarashada, qolalka kaydka.Tani ma aha oo kaliya inay si weyn u yarayn karto kharashka, laakiin sidoo kale waxay gaari kartaa saameynta nadiifinta muuqaalka iyo midnimada.
Si loo daboolo baahiyaha dadka wakhtiyada, la kulmaan nolosha guriga ugu yar, oo u sawiraan walxaha talyaaniga ee minimalism, Yaris wuxuu si weyn u bilaabay quful albaab cusub oo aan la arki karin.
Iyada oo tayada sare leh iyo dareenka xooggan ee naqshadeynta, albaabka qufulka leh "aan la arki karin" ayaa loo isticmaali karaa in lagu dhejiyo midab kasta oo albaabka si loo hubiyo in alaabtu si fiican u dhexgalaan meel bannaan, oo si dhab ah u qarsoon albaabka, oo leh aragti aan xuduud lahayn, iyo aan qummanayn.
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale ku habboon tahay muuqaalada albaabka muraayadda, jebinta caadooyinka codsiga ee muuqaalada hal-gacan, gaaritaanka wada noolaanshaha wada noolaanshaha iyo ilaalinta joogteynta muuqaalka.
Waqtiga boostada: Febraayo-24-2022